Somali page 1 of 1 - English-Video.net
TED Talks with Somali transcript
99 dhib ayaan qabaa...laleemana waa mid kaliya
"Waxaan qabaa cudurka laleemada. mar walbo waan gargariira," Maysoon Zayid ayaa ugu horeentii shaaca ka qaadeso hadalkaan qosolka badan ee loo riyaaqay. (Xaqiiqdii, Waa mid lagu qoslo.) " waxaan ahay sidii Shakira oo la kulantay Muhammad Ali." Si wanaag iyo caqli ku dheehan tahay, majaajiliistada kasoo jeeda Arab-Amerikanka ayaa nooga sheekeeneyso safarkeedii layaabka lahaa ay la kulantay intii aay aheed Aktarad, Majaajiliiste qosol, deeq-bixiye iyo udoode dadka cuuryaanta ah.
Diana Nyad: Waligaa, marnaba haquusan.
Habeenkii mugdiga daran aheyd, malaay waabaaygu duray, biyaha dhanaanka ay ku margatay, kaligeeda isku heeseesay,qarweeysay... Diana Nyad dabaasheeda ayee iska sii wadatay. Waana qaabkii ay ugu dambeentii ku gaartay hamigeedii nololeed ayadoo cayaariyahan ah.100-mile oo dabaal aan caadi aheen ay ka soo bilaawday Cuba ila ka gaarto Florida-- ayadoo 64 jir ah. Maqal qisadeeda.
Mashiinkeyga biyaha hoostiis
2013-02-25 1,320,203 views
David Lang waa sameeye kaasoo kaligiisa is baray siduu ku noqon lahaay bad-ku-taqasuse--ama, baray mashiin si uu mid asiga oo kale u noqdo. Hadalkii Lang ee soo jiidashada lahaa, Saaxibkeeni TED, ayaa na tusaya sidii asiga iyo kuwii shabakada bada jeclaa ay isku baheesteen si ay u dhisaan qalab baarayo bada hoosteeda oo raqiis ah misna il-furan leh.
Xiriirka ka dhexeeya shaqo la'aanta iyo argagixisada
2013-09-20 1,077,230 views
Waayo, dhalinyarada iyo shaqo la'aan ka jirto magaalooyinka waaweyn ee dunida , riyooyinka fursadaha iyo hantida ku aadan mar ayey run iman -- laakiin inta badan, waa culeys waayo waxa raadiya kooxaha argagixisada ah iyo ururada kale ee rabshaded. Doode xuquuqda Aadanaha Mohamed Ali wuxuu isbarbar dhigaya sheekooyin uu ka haayo magaalada Muqdisho si uu u sameeyo kiis xoogan u ku micneeyey wax cusub u soo saraarida da' yerta magaalada iyo himilooyinkooda.
Kumaan ahay? Mar kale feker
2013-06-11 2,878,196 views
Sidee baan u go'aan sanaa qofkaan nahay? Majaajiladii layaabka laheed ee Hetain Patel uu ka jilaayay aqoonsiga, luqada iyo lahjadaba--- misna idinku taxadiyeenayo inaad si qoto dheer leh u fekertaan intii aad kaliya si muuqal sare ahaaneed u fekeri laheeden. Khilaawo farxad sare leh oo ay asiga iyo majaajilste YuyuRau jilayeen, oo ay ku baroorisay ama ku dhiiri galisay Bruce Lee.
Trita Parsi: Iraan & Israa'iil: Nabaddu waa suura gal
2013-06-26 796,662 views
Iran iyo Israil: waa labo wadan oo xariiro hore leh taaso umuuqato in sooxumanayan, laakin dhamaan muronkoodi hadal karsananta, waxaa jirto taarikh kuqarsoon oo iskaashi ah, xataa saaxibtinimo . hadal warbixin leh , Trita Parsi waxo muujinaya sida isbadalka istaraajinimada hore ee lasoo dhafay tasoo kadhigan karto nabada mustqablaka ee labada wadan hadii ay doorbidan .
Peter Attia: Ka waran hadaynu ku khaldanay cudurka macaanka?
2013-04-05 4,258,278 views
Dhakhtar dhalinyar isagoo ah Peter Attia wuxuu yaraysanayaa arinka buke macaan qaba oo aad u cayilan, isagoo isku qancinaaya inuu isagu isugu wacnaa in qaliin cad-gooye ah lagu sameeyo. Lakiin sanado kadib ayuu garawysanayaa oo ay ka soo hor baxaysaa xaqiiqo cilmiya isagoo is weydiinaya: Fikirkaynu macaanka ka haysanaa ma saxanyahay? Suurtagal ma tahay in macaanku cayilnaanta sababo ee aanay cakiskeeda ahayn? Wuxuu diirada saarayaa sida mabaa"diideenu inuu hogaamin karto dagaal caafimaad oo seeflaboodnimo ah.
Joseph Kim: Familkeyga aan ku lumiyay South Korea iyo midka cusub aan helay.
Qaxooti hadda ku nool Mareynkanka, Joseph Kim oo ka sheekeynaya noloshiisa Waqooyiga Kuuriya inta lagu guda jiray sanadii abaarta. Wuxuu billaabay in uu abuurto nolol cusub. Lakin weli waxa uu raadinayaa familkiisa ay kala lumeen.
Lisa Bu: Sidee buugaagta u furi karaan maskaxdaada
2013-02-28 4,963,279 views
Maxaa dhacaya marka riyo aad soo qaadey laga soo bilaabo caruurnimadaada ... aanan marna run noqon? Sida Lisa Bu ay ula qabsatey nolosha cusub ee Mareykanka, iyada oo u jeestay buugaagta si ay u ballaariso maskaxdeeda iyo in ay nafteeda u abuurto wado cusub . waxey la qeybsaneysaa hab gaar ah oo ah oo wax loo akhriyo. hadalkaan qurxoon,iyo hadal shakhsiyadeed oo ku saabsan sixirka buugaagta.
Peter Singer: Sababtee iyo sidee loo samayn karaa deeqsimada waxtarka leh.
2013-03-01 1,880,611 views
Hadaad nasiib u leedahay inaad noolaato doonis la'aan, waa hibo dabiiciya inaad u noqoto deeqsi dadka kale. Laakiin filosofarka Peter Singer, wuxuu suaalayaa, waa sidee sida ugu wanaagsan ee wax loo bixiyaa? wuxuu ka hadlayaa tijaabooyin badan oo fikir ah oo layaab leh oo kaa caawinaysa inaad isu dheeli tirto shucuurta iyo ficil-gelinta -- aadna u yeesho saamaynta ugu wayn wax kastood aad wadaagi kartid.
Shabana basiji-rasikh: Car gabdhaha Afghanistiyiinta wax bar
2012-12-01 1,085,179 views
Qiyaas wadan gabdhihiisu ay u dhuumanayaan iskuulka, hadii la qabtana iyagoo wax baranaya ay cawaaqib xumo la kulmayaan. Tani waxay ahayd Afghanistan oo ay ka talinayeen Taliban, misna maanta ay calaamadaha halistaas ay weli jirto. 22-jir Shabana Basij-Rasih waxay leedahay iskuul ku yaalo Afghanistan. Waxay u dabaal dageesa awooda go'aan ee qoys kuwaaso aaminay gabdhahooda-- misna waxay noo sheegeesa aabe geesi ah oo u istaagay hanjabaad kaga imaanaysay dadkiisa.
Fahad Al-Attiya: Wadan aan biya lahayn
2012-04-22 1,529,461 views
Suurayso wadan leh ilo tamareed fara badan --saliid, gaas, ilays-qoraxeed, dabayl iyo dabcan lacag--laakiin la' mid kamida baahiyaha aasaasiga ah ee nolosha: biyo. Injineer kaabayaasha dhaqaalaha ah Fahad Al-Caatiya wuxuu ka hadlayaa qaababka cajiibka ah ee wadan yar oo bariga dhexe ku yaala oo la dhaho Qadar uu u samaysto qaabka waraabkiisa biyaha.
Terry Moore: Maxay 'X' u tahay midaan la garanayn?
2012-02-28 3,872,013 views
Maxay 'X' ugu suntantahay midaan la garanayn? muxaadiradan gaaban ee xiisaha leh, Terry Moore wuxuu nagu siinayaa jawaab ta mucjisada ah.
Misha Glenny: Kireysashada Burcada Internetka
2011-07-13 1,438,902 views
Ayadoo ay jirto maalgalin Balaayiin Dollar ah oo lagu bixiyo amaanka internetka, ayaa waxaa la iska indha tiray mid kamid ah mushkiladaha aasaaska u ah arinkaas, waxaana weeye, dadka qora furayaashaas (Virus-yadaas) wasaqeesan, Misha Glenny oo ah sirdoon arimaha danbiyada ayaa waxa uu soo bandhigayaa nolosha qaar kamid ah dadkaas barnaamijyada sameeya ee danbiyada loo heysto aduunka daafihiisa, waxa uuna keenayaa fikrad cajiib ah.
Mikko Hypponen: La dagaalida Virus-yada, difaaca internetka
2011-07-14 1,847,520 views
25 sano ayaa laga joogaa xiligii la sameeyay Virus-kii ugu horeeyay ee kambiyuutarada shakhsiyeedka ku dhaca (Brain A) , wax-wax dadka lagu dhibo ahaa markii hore, ayaa hada waxa uu noqday wax falal danbiyeedyo iyo jaasuusnimo lagu geysto. Khabiirka amaanka Kambiyuutarada Mikko Hyppönen ayaa waxa uu noo sheegayaa sidii aan ku istaajin leheen Virus-yadaasi cusub si aysan shabakada khatar u gelinin sida aan ognahay.
Hooyo iyo inanteeda oo ah dhaqaatiir geesiya-yaal.
Waxaa loogu magac daray "Weli-yaasha Somalia." Dhaqtar Hawa Abdi iyo gabadheeda Deqo Mohamed ayaa ka hadlayo xaruntooda caafimaad ee ku taalo gudaha Somalia, halka ay-- wejidayada dagaalada sokeeye iyo cadaadiska daaha ka rogan ee dumarka,--ay u dhiseen Isbitaal, Iskuul iyo shacab nabadeed.
Lesley Hazleton: Lesley Hazleton: Akhrinteedi Quraanka
2010-10-10 2,252,412 views
Lesley Hazleton maalin bay u fadhiisatay siday Quraanka u akhrin lahayd. Wixii ay heshay—qof Muslima iyadoon ahayn,ahna dalxiise kitaabka barakaysan ee Islaamka—wuxu ahaa waxaanay filanayn.Muxaadaradan ka imanaysa TEDxRainier, Hazleton kaftankeeda iyo dhuuxisteeda cilmi ee la yaabka leh, waxay inagula wadaagaysaa furfurnaantii iyo cajaaibtii ay la kulantay.
Patrick Awuah: Sidee wax loo baraa hogaamiyayaasha?
2007-06-06 1,752,363 views
Patrick Awuah wuxu ka sheekaynayaa sida ay muhiim u tahay qaabka wax loo baro hogaamiyayaasha mustaqbalka-ardayda-iyagoo lagu carbinayo qaababka halabuurka nolosha iyo culuumta saacida arinkaas/liberal arts.
8 Sirood ee Guusha
Maxey dadku u guuleystaan? ma sababtoo ah waxa ay yihiin dad caqli leh? ama waxa ay yihiin dad nasiib leh? midkoodna ma aha. Falanqeeye Richard St John ayaa ku soo koobey sanooyin badan oo uu wareysiyo sameynaayey 3-daqiiqo jeedintan sawiro leh aan la hilmaami karin oo ku saabsan siraha qarsoon ee guusha..
Nick Bostrom: Baadidoon falsafadeed oo ku aadan xalka mushkiladeheena ugu waawayn
2005-07-14 967,767 views
Nick Bostrom oo ah filasoof iyo cilmibaadhe daarasadaha ''waxa biniaadantinimada ka shisheeya/transhummanism'' oo jooga jaaamacad Oxford ayaa wuxuu lafa gurayaa mustaqbalka aadanaha, wuxuna is waydiinayaa inay suurtagal tahay in la bedelo dabeecadaha biniaadamka ee aasaasiga si xal loogu helo dhibaatooyinkeena ugu kakan.